1572nm 10mW DFB အနီအောက်ရောင်ခြည်လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1572nm 10mW DFB အနီအောက်ရောင်ခြည်လိပ်ပြာလေဆာ Diode
1572nm 10mW DFB အနီအောက်ရောင်ခြည်လိပ်ပြာလေဆာ Diode
1572nm 10mW DFB Infrared Butterfly လေဆာလေဆာ Diode စီးရီးသည် CW output စွမ်းအင်သည် 10mW သို့မဟုတ် 20mW ရှိသည်။ အသုံးပြုသူသည် ITU လှိုင်းအလျားအတွင်းရှိမည်သည့်လှိုင်းအလျားကိုမဆိုမှာယူနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအဝေးမှအာရုံခံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊
1572nm 10mW DFB Infrared Butterfly Laser Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1572nm 10mW DFB Infrared Butterfly Laser Diode ၏နိဒါန်း
1572nm 10mW DFB Infrared Butterfly Laser Diode ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
output ကို 10mW သို့မဟုတ် 20mW;
SM ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ် PM ဖိုင်ဘာ၊
စက်မှုလုပ်ငန်းစံ 14 pin ကိုလိပ်ပြာအထုပ်;
4. 1572nm 10mW DFB Infrared Butterfly လေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဖိုင်ဘာ optical အာရုံခံကိရိယာ;
1572nm 10mW DFB အနီအောက်ရောင်ခြည်လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည်၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â 'ƒ)
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1571 1572 1573 nm
6. Package drawing & PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1572nm 10mW DFB အနီအောက်ရောင်ခြည်လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည်။
၇။ ၁၅၇၂nm ၁၀ မီဂါဝပ် DFB အနီအောက်ရောင်ခြည်လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
A: Box optronics သည်အမျိုးမျိုးသောလှိုင်းအလျားများကိုဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်းအသုံးချမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
hot Tags:: 1572nm 10mW DFB အနီအောက်ရောင်ခြည်လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော
1574nm DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode